The Ab Presents Nepal » नेकपाका अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल नै विदेश भ्रमणमा !
नेकपाका अध्यक्षद्धय ओली र दाहाल नै विदेश भ्रमणमा !
काठमाडौं-: प्रमुख विभागहरुको जिम्मेवारी टुंग्याउन सकस भइरहेको अवस्थामा नेकपाका अध्यक्षद्वय बाँकी काम थाती राख्दै विदेश भ्रमणमा जानु हुँदैछ। नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विदेश भ्रमणमा जान लाग्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली आगामी साउन १८ गते सिंगापुर जाने कार्यक्रम तय भएको छ भने दाहाल आज युएईको दुबई जाँदै हुनुहुनछ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि आउँदो साउन १८ गते प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जान लाग्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली १० दिने सिंगापुर भ्रमणमा जान लागेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्यमा केही समस्या भएपछि गत शुक्रबार आर्मी अस्पताल छाउनीमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो’।
आर्मी अस्पतालमा उहाँको मिर्गौलाको वायोप्सी भएको र अहिले मुटुको गति ठीक नभएकाले थप उपचारका लागि चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीलाई विदेश जान सल्लाह दिएको बुझिएको छ । यस्तै, अर्का अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि आज युएईको दुबई प्रस्थान गर्न लाग्नुभएको हो। दाहाल दम्पतीसँगै पुत्री गंगा र नातिनी पनि जाँदै छन्’।